true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 2 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
Indaba yomqondo kukhulunywa ngayo isikhathi esingaphezu kweminyaka eyizinkulungwane ezintathu ngaphandle kwenqubekela phambili enkulu eyenzekile ebingayenza le ndaba ibe lula kunoma ngubani ukuthi ayisebenzise.
“I-Logic” isho isihloko sokucabanga, okuwukucabanga ngamaqiniso nemibono nokwenza izinqumo ezifanele kuzona.
Kalula, i-logic isifundo sokuthi imicabango noma amaqiniso ahlanganiswa kanjani ngendlela enengqondo ukuchaza izinto kanye nekhono lokwenza lokhu. Eminyakeni eyikhulu edlule bekukhona abantu abaye babiza i-logic ngesayensi. Lokho, nokho, akwenzi mqondo ngoba isayensi yangempela ukucwaninga okuhleliwe, okunembile futhi okuphelele kwesihloko okwenziwayo ukufakazela noma ukuphikisa imibono ekhona, ukuthola amaqiniso amasha nokuthuthukisa imibono emisha ngokusebenzisa ulwazi ngezindlela kwavunyelwana ngakho ukuze ubone ukuthi kusebenza ini.
Ngakho ke, uma i-logic “bekuyisayensi” ngempela, abantu bebezokwazi ukucabanga. Kepha abantu abakwazi ukucabanga logically.
Ngisho negama elithi “logic” alinabo ubungane ngokuphelele futhi lingenza umuntu esabe ukusondela kulo, ecabanga ukuthi lingaphezu kwamandla abo ukuliqonda. Ukube ubungafunda incwadi ye-logic kungenzeka ukuthi udidekile futhi ukhungathekile uzama ukuyifinyelela, empeleni, ungafundi ngisho nokuthi ukucabanga kanjani—okuyilokhu i-logic okufanele kukusize ukukwenza.
Kodwa ke i-logic noma ikhono lokubonisana libaluleke kakhulu kunoma ngubani ophethe ukuhlela nokuphatha iqembu noma inkampani. Uma ungakwazi ukucabanga kahle, ngeke ukwazi ukufinyelela eziphethweni ezidingekayo ukwenza izinqumo ezifanele.
Amahhovisi amaningi kaHulumeni, ohulumeni bonke, imiphakathi namaqembu basebenzise ithuba lokungaqondi kwabantu kwe-logic isikhathi eside. Lokho kungenxa yokuthi lapho abantu bengakwazi ukucabanga ngokucacile noma ukucabanga nokuzenzela izinto, bangalawulwa kalula ngokubatshela amanga nangokuthola ukusekelwa kwezimbangela ezimbi noma ezingezinhle (izinhloso zeqembu noma ukunyakaza).
Ngakho ke i-logic ayikaze ibe yindaba esekelwayo kepha empeleni okuphambene nalokho. Ukuqondisisa kwe-logic kucindezelwe.
Ngisho nezikole eziseMelika nase-Europe ziye zazama ukukholisa abafundi ukuthi kufanele batadishe izibalo ngoba “yindlela abacabanga ngayo.” Futhi, vele, abantu abacabangi ngaleyondlela.
Umphathi, umphathi omkhulu, ingcweti (isisebenzi esinamakhono esenza izinto ngesandla) nomabhalane ngamunye banokusebenzisa i-logic ebaluleke kakhulu futhi edingekayo. Uma bengeke bekwazi ukubonisana, bangenza amaphutha abiza kakhulu nachitha isikhathi, futhi kungenza inhlangano yonke idideke futhi ichitheke ngokuphelele.
Lokho umuntu ngamunye kubaphathi nakwezintambo zomsebenzi avame ukuzisebenzisa futhi abhekane nazo yidatha (imininingwane) nezimo (izigcawu ezijwayelekile ezibanzi lapho kukhona khona idatha yedatha yamanje). Ngaphandle kokuthi bangabona ubunzima noma izinkinga endaweni yabo futhi bacabange indlela yabo ngokusebenzisa ulwazi, bangafinyelela kwiziphetho ezingalungile futhi bathathe izinyathelo ezingalungile. Lokhu kuzokwenza nje izinto zibe zimbi kakhulu.
Namuhla, uMuntu ucabanga ukuthi i-mathematics ingamsebenzela ngokwengqondo kepha izimo zakhe eziningi ziba zimbi kakhulu ngenxa yalesi sizathu esilahlekile sokuzethemba (ukukholelwa entweni ethile). Isizathu sokungahleleki kahle yingoba izinkinga zabantu ziyaxaka kakhulu ngezici eziningi (izimo) ezibandakanyekayo okwenza ukuthi izibalo zinganele ngokuphelele. Ngamanye amagama, akwanele.
Uma abantu kubaphathi nabasebenzi bengazi i-logic, inhlangano ingalahlekelwa ukuqondiswa nokuqina ngakho ke idinga izinga eliphakeme kakhulu lobuhlakani, ikhono lokuyibamba ihlanganyele futhi iqhubeke isebenza. Ngeshwa, lelo zinga lobuhlakani nekhono alitholakali kalula kunoma yiliphi iqembu noma inhlangano, ngaphandle kwezindleko eziphakeme kakhulu ngokuqasha uchwepheshe. Kepha noma kunjalo akusona isiqinisekiso sokuthi izinto zizothuthuka kwi-organization.
Kuwo wonke umlando kuye kwenzeka impucuko yonke ife ngoba ukuqonda bekungaziwa futhi kusetshenziswa ababusi bayo, abaholi Kanye nabantu.
Ngakho ke lesi yisihloko esibaluleke kakhulu.
I-Scientology iqukethe indlela yokwenza i-logic itholakale kuwe ukuze uyiqonde futhi uyisebenzise. Lokhu kuyintuthuko enkulu yokuthatha isifundo esinzima kakhulu futhi cishe esingenzeki futhi senziwe sibe lula. Manje izimpendulo ezifanele zezimo zingatholakala kaningi kakhulu futhi ungaphumelela ezenzweni zakho ukuze usinde futhi unwebe. Lokhu kuyasebenza kunoma yiliphi iqembu, inhlangano noma impucuko.
Intuthuko kuyinto elula:
NGOKUSUNGULA (ukwenza okuthile kucace noma kubonwe) IZINDLELA LAPHO IZINTO ZIBA ILLOGICAL, OMUNYE ENGASUNGULA UKUTHI YINI I-LOGIC.
Ngamanye amagama, uma umuntu enokuqonda okwenza izinto zingaqondakali noma zingaqondile (ziyahlanya) kungenzeka ukuthi ucabange ukuthi kuyini okwenza izinto zibe nengqondo.
Kunezindlela eziqondile, lapho abantu bedlulisa imininingwane noma benza isimo saziwe kwabanye, ukuze kube illogical. Lezi izinto ezikwenza ube nombono ongalungile wesimo esithile. Indlela ngayinye ehlukile ibizwa ngokuthi i-outpoint, noma ngabe iyiphi i-datum eyodwa (ucezu olulodwa lolwazi, iqiniso) olunikezwa njengeqiniso lokho empeleni akunangqondo. Ngayinye yalezi ichazwe ngezansi ngezibonelo ukuyenza icace bha.
Noma yini ekhishiwe, okusho ukuthi ishiywe ngaphandle futhi ayikhulunywa noma ayiveli, iyi-outpoint.
Lokhu kungaba ngumuntu oshiyiwe, into, amandla, isikhala, isikhathi, ifomu, ukulandelana noma indawo eshiyiwe (indawo noma izimo lapho okuthile kwenzeka noma kufanele kwenzeke). Noma yini engakhishwa okufanele ngabe kukhona kuyi-outpoint.
Isibonelo, uma ushiya ikhodi yeposi ekhadini olithumele kwelinye ilungu lomndeni, ingahle ilahleke kwiposi noma ithathe isikhathi eside ukufika kulowo muntu. Lena idatha ekhishiwe. Noma uthathe isibonelo sokuthi ube nephathi yokudla isidlo sakusihlwa kodwa umngani akafiki owayethembise ukuthi uzofika. Lowo kungaba umuntu oshiyiwe futhi uzokwazi ukuthi kukhona okuthile okungalungile. Ungase uzibuze ukuthi ukuphi lowo mngani noma ukhathazeke ngokuthi mhlawumbe kukhona okuthile okwenzekile kumngani wakho.
Imvamisa, lena i-outpoint eshalazelwa kakhulu njengoba kungekho ukuheha okunaka ngqo.
I-Sequence yi-oda izinto ezenzeka ngayo noma indlela into elandela ngayo enye into ngokulandelana okunengqondo.
Noma yiziphi izinto, izehlakalo, osayizi, kwi-sequence engalungile kuyi-outpoint.
Isibonelo, uchungechunge lwezinombolo 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 ukulandelana okushintshiwe, noma i-sequence engalungile. I-sequence elungile ingu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ukwenza isinyathelo sesibili se-sequence sezenzo ngaphambi kokwenza isinyathelo esisodwa kungabalwa ukuthi kudideke noma yikuphi ukulandelana kwezenzo.
I-outness eyisisekelo nje kuwukungabi na-sequence nhlobo. (I-outness yisimo noma isimo sento ethile engalungile noma elahlekile.) Lokhu kudala ukuthi abantu babe nemibono engaguquki, okuyimibono noma izinkolelo umuntu anazo futhi angeke azishintshe. Isibonelo, ungakubona lokhu kumuntu onemizwa emibi kakhulu ngelinye iqembu, inkolo noma ubuhlanga ngoba behlukile. Lo muntu akakwazi ukubheka umuntu ngamunye futhi ababone njengoba benjalo, esikhundleni salokho ubambelela embonweni wakhe ongaqondile futhi azizwe enenzondo.
I-outness eyisisekelo ibonakala futhi esimweni esibizwa ngokuthi ukungahlukani, ukuhlanya, lapho umuntu ecabanga ukuthi izinto ziyehlukile kulokho eziyikho noma ucabanga ukuthi ezinye izinto ezingahambisani nakho ziyafana. Umuntu onjalo akayixhumi imicabango yakhe kanye namazwi akhe nezinto azizungezile. Lolu hlobo lomuntu luphinde lugxume luzungeze futhi lushintshe ukusuka kwesinye isihloko kuya kwesinye olungahambisani ngokuhlangana futhi nge-sequnce engekho obala. Lolu hlobo lomuntu ohlukanisayo luyisibonelo eseqise kakhulu lapho izinto ezinento yokwenza komunye nomunye zingabonwa ngumuntu, noma izinto zangempela ezingenakuhlangana komunye nomunye kucatshangelwa ukuthi zinokuthile okufanayo.
“I-Sequence” kusho ukuqondanisa (kumugqa) ukuhamba ngesikhala noma ngesikhathi noma zombili.
I-Sequence okufanele kube munye kodwa akunjalo kuyi-outpoint (njengesibonelo sokulandelana okuyilo kwezinombolo ezimbozwe ngaphambili).
“I-Sequence” engekho kodwa okucatshangwa ukuthi kungokunye kuyindlela yokuphuma.
Inqola-ngaphambi-kwehhashi ezingekho kwi-sequence ziyi-outpoint.
Kwesinye isikhathi umsebenzi wakho onzima kakhulu ukuchazela othile ukuthi yini ezokwenzeka kubo uma beqhubeka nokwenza abakwenzayo. Kungenzeka bengakuboni nhlobo. Lokhu kungumphumela (umphumela wento). Uzama ukutshela lo muntu ukuthi “Uma usaha le ngxenye ohleli kuyo uzowa,” kodwa akayikubona.
Lokhu futhi kunjalo nangamaphoyisa. Bazama ukwenza kucace kubantu ukuthi kuzokwenzekani uma benza okungalungile, kepha abanye abantu abanawo umbono we-sequence Futhi ke ukusongela kwephoyisa lokujezisa kusebenza kahle kubantu asebeziphethe kahle, ngoba kunengqondo ngokwengeziwe, kepha akusebenzi kumuntu ontshontsha noma alimaze abanye njengoba beyizigebengu ngoba abakwazi ukucabanga nge-sequence—zimane zilungiswe, okusho ukuthi ukunaka kwabo ngokuqhubekayo kukumqondo noma kokuthile. Ngakho ke ubungasho ukuthi “Uma ubulala umuntu uzoya ejele,” futhi lokhu i-sequence esobala. Kepha umbulali olungele ukuziphindisela (ukulimaza noma ukujezisa omunye umuntu ngoba enze into embi kuwe) angeke acabange nge-sequence. Umuntu kufanele acabange ngama-sequences ukuze abe nama-sequences alungile.
Ngakho ke, kuvame kakhulu kunokuba ungacabanga ukubona ukulandelana okushintshiwe ngoba abantu abangacabangi ngokulandelana ababoni ukulandelana okuguquliwe ezenzweni zabo noma ezindaweni zabo.
Uma uzijwayeza ukubona ngamehlo ama-sequences ne-drill ukuguqula ukunaka kwakho, ungakuqondisa lokhu bese ukubuyisela njengekhono.
Umbhali wabona ukuthi amabhayisikobho nomabonakude kuyehlwaya ukunaka futhi akuvumeli ukunaka kwabantu kushintshe. Isibonelo salokhu yilokho okwaziwa ngokuthi “i-couch potato” umuntu ovele ahlale abuke umabonakude kakhulu futhi angaphili impilo esebenzayo. Futhi lapho abazali bekhulisa izingane zabo zibukela umabonakude kakhulu ukuze zihlale zimatasa, kungenzeka ukuthi uzogcina usunabantu abanokuthambekela (indlela umuntu aziphatha ngayo ngenxa yokucabanga kwakhe) ukuguqula ukulandelana noma ukungabi nokulandelana okuthile konke. Lokhu kungenxa yokuthi bebenake kakhulu umabonakude ngakho abayibonanga impilo ebazungezile njengoba injalo ngempela.
Uma isikhathi kufanele sinakwe futhi kungenjalo kuzoba i-outpoint “ye-dropped time.” Kuyicala elikhethekile le-datum ekhishiwe.
Isibonelo, uma uthola isimemo sephathi sokudla kwakusihlwa kodwa usuku lungabhalwanga kwisimemo, ubungeke wazi ukuthi luhlelwe nini futhi awukwazi ukuya.
Isikhathi esilahliwe futhi singaba nomphumela omubi ngendlela eyisimanga (oyingozi) ongeza kuze kufezeke ukuhlanya (ubuhlanya).
Isibonelo, iphephandaba kusuka ngo-1814 nelinye kusuka ngo-1922 lafundwa elinye emva kwelinye ngaphandle kwezinsuku lizoletha ukudideka okunzima ukuliqonda. Leli phephandaba lizovele libonakale lingajwayelekile, kodwa kunzima ukuqonda ukuthi kungani.
Umbiko wokufingqa wesimo esiqukethe izehlakalo ezihlukile ezenzeka ngaphezulu kwesigamu sonyaka, ngaphandle kokusho kanjalo, ungadala impendulo engabonakali ilungile ngalesi sigameko samanje.
Ngokwesimo sabantu abahlanyayo isikhathi samanje yisikhathi esisele, okusho ukuthi banamathela esikhathini esidlule esinqunyiwe futhi abaliboni ikusasa. Ngokumane utshele iqembu labantu abahlanyayo ukuthi “beze kwisikhathi samanje” kuzokhipha ukwelashwa “okumbalwa” okufana nezimangaliso. Futhi ukuthola usuku lokuqaqanjelwa noma lwezinhlungu ngokuvamile kuzozenza zishabalale.
Ukuphazamiseka kwesikhathi (okungenangqondo) kunamandla kangangokuba isikhathi esishiywe ngokuqinisekile siyifanelekela njenge-outpoint.
Lapho uzwa amaqiniso amabili aphikisanayo (okuphambene), elinye lingamanga noma womabili angamanga.
I-Propaganda (imininingwane noma amahlebezi okuvame ukubangamanga) neminye imisebenzi ibhekana ikakhulu namanga futhi idala ukuphazamiseka okuningi futhi icasule.
Noma ngabe kwenziwa ngenhloso noma cha, amanga ayi-outpoint. Kungahle kube yiphutha noma kungamanga acatshangwe ngokucophelela noma omunye asho ukuvikela okuthile noma othile, kepha kusalokhu kuyi-outpoint.
Noma yini engamanga ingena kulesi sigaba se-outpoint. Umuntu wamanga, isenzo, inhloso, noma yini ezama ukuba yinto ethile ngaphandle kwalokho okuyikho ngampela, kungamanga namaphuzu ne-outpoint.
Inganekwane (indaba eyenziwe) engazenzi enye into eyiqiniso akuwona amanga.
Ngakho-ke isimo samanga sisho ukuthi “ngaphandle kwendlela okubonakala ngayo” noma “ngaphandle kokuba kuvezwe okuthile.”
Isibonelo, uma uke waya endaweni yokudlela edla ukudla okusheshayo ngoba ubone ukuthi ama-poster abo athuthukisa okusha “i-Jumbo Burger” kepha okutholakele akubanga njengokufana nemikhangiso yabo, lokho okusobala ukuthi kungamanga.
Akudingeki ucabange kakhulu ngakho futhi akunzima kuwe ukubona ukuthi into ekhushulwe noma yethulwe njengento eyodwa kepha empeleni enye into, kuyi-outpoint.
Noma yinini lapho ukubaluleka kwento kushintshwa kusuka ekubalulekeni kwangempela, kwenziwa kubukeke noma kubonakale kungcono noma kwenziwa kubonakale kukubi ngokwedlulele, lokho kuyi-outpoint.
Ngamanye amagama, okuthile kunganikezwa ukubaluleka okukhulu kunalokho okunakho, njengokuthi umuntu okhanda ubucwebe ukhulisa intengo yendandatho yedayimane ephindwe kathathu kunenani layo langempela.
Futhi, into ethile ingabelwa ukubaluleka okungaphansi kwalokho enakho. Isibonelo, uma ngabe uthengisa ifenisha esendlini ukuze ususe enye ifenisha owawukade uyithengile esitolo esithengisa izinto ezike zasebenza ngaphambilini, ungathengisa izinto ngamanani aphansi kakhulu uma ungazi ukuthi zingama-antique abalulekile.
Noma kunezikhathi lapho izinto ezimbalwa zokubaluleka okuhlukile zinganikezwa inani elifanayo lokubaluleka, kubesengathi ziyafana zonke.
Njengesibonelo, umuntu ozinze endleleni azizwa ngayo ngabantu abavela ezweni elithile angahle acabange ukuthi “bona” bayefana bonke futhi ngeke akwazi ukubona umehluko kubona.
Konke lokhu kuyaziveza, izihumusho ezintathu zento efanayo.
Ukuze uthole ukuthi kuyini ukubaluleka kwanoma yini, udinga ukwazi ukuthi konke kuhambisana nokwazi ukuthi into ethile injani emhlabeni wangempela.
Lapho umuntu enza iphutha ngenkathi ezama ukufeza okuthile, njengokucabanga ukuthi uyena noma kufanele aye ku-A futhi athole ukuthi uyena noma kufanele aye ku-B, lokhu yi-outpoint.
Lokhu kuvame ukuba yiphutha ekuqambeni kahle ukuthi umuntu othile noma into ethile iyini ngempela. Kungama-purposes noma ama-goals umuntu angalungile ngakho. Isibonelo, “Uma sidiliza u-X sizobe sesilungile” kuvame ukuholela ekutholeni ukuthi bekumele kubengu-Y esikhundleni.
Nasi esinye isibonelo sokukhetha i-target engalungile. Lokhu, noma okunye okufana nalokhu, kwenzeka esikhathini esidlule lapho umuntu ethathe isinqumo sokubulala inkosi ukuze abantu bakhululeke bengakhokhiswa intela, nokho lokhu ushiya umuntu oqoqa intela ephila ukuze asetshenziswe uhulumeni olandelayo.
Ukungabi nabulungiswa isenzo esingenabulungiswa noma esingalungile noma ukuphathwa kothile futhi kuvame ukuba yi-outpoint ebizwa ngokuthi i-target elingalungile.
Isibonelo se-target engalungile okungukungabi nabulungiswa kungaba ukubopha abantu abadla izidakamizwa, kepha kuklomeliswe inkampani ezenzayo futhi ethengisela abantu izidakamizwa.
Kwezempi, amacebo abo nezindlela zokuhlela nokuqondisa amabutho, izindiza nemikhumbi yempi cishe njalo kungumzamo wokuba isitha sihambe ngendlela engafanele noma silandele i-target engalungile ukuze isitha sibebuthakathaka futhi bese siyehlulwa.
Futhi izikhathi lapho omunye umuntu engathandi noma ezonda omunye umuntu lapho behlangana okokuqala imvamisa kususelwa ephutheni lokucabanga ukuthi u-Bill ungomunye umuntu ogama lakhe lingu-Pete. Lesi ngesinye isibonelo se-target engalungile.
Inani elikhulu le-irrationality (ukungacabangi noma ukuziphatha ngendlela engenangqondo noma engezi umqondo) isuselwa kwi-target engalungile, imithombo engalungile, kanye nezimbangela ezingalungile.
Uma utshela isiguli ngokungalungile ukuthi sona sinezilonda lapho singenazo izilonda, sona sinamathela kwi-outpoint eyehlisa noma evimbela ukululama kwaso.
Inani lomsebenzi ochithwe kuma-purposes nakuma-targets angalungile kungakhanyisela umhlaba iminyaka eyinkulungwane.
“Umthombo ongalungile” ngakolunye uhlangothi lwe-coin ye-target engalungile, okusho ukuthi yindawo, umuntu noma into lapho okuvela noma okuqala kuyo okuthile uma kuqhathaniswa nokuqondiwe.
Isibonelo, imininingwane ethathwe emthonjeni ongalungile, ama-oda athathwe emthonjeni ongalungile, izipho noma izinto ezibonakalayo (izimpahla) ezithathwe emthonjeni ongalungile konke lokhu kuholela ekudidekeni ekugcineni nasezinkingeni ezingaba khona.
Lapho ungaqapheli ukuthi uthola okuthile umthombo ongalungile kungabanga amahloni kakhulu noma ukudideka. Eqinisweni, iqhinga eliyintandokazi labantu abanobuhlakani. Isibonelo, uMnyango we-Disinformation eMpumalanga Jalimane wawunezidlela eziyinkimbinkimbi kakhulu zokubeka ngasese imininingwane engamanga nokufihla umthombo ukuthi ivelaphi.
Ezingeni elincane, ukuthatha umbiko kumuntu omaziyo ukuthi mubi (umuntu omubi noma ongelutho) futhi usebenzise imininingwane yakhe ukuthatha isinyathelo, yisizathu esivamile samaphutha enziwa ngabaphathi.
Lapho kukhulunywa ngezinto ezimbili endabeni eyodwa eziphikisanayo (ezihlukile) komunye nomunye, ziba “amaqiniso aphikisanayo.”
Lokhu kwe-illogic kungabizwa nangokuthi isimo samanga, ngoba enye yezitatimende ingamanga.
Kepha uma wenza uphenyo awukwazi ukusho ukuthi kuyiqiniso elingakanani lelo ngaphandle kokufunda nokucabanga ngalolu daba. Ngokusekelwe kulokho kuba yi-outpoint ekhethekile.
Isibonelo, isitatimende esithi “Inkampani yathola imali engenhla eyisilinganiso kulelo sonto” nokuthi inkampani “Ayikwazi ukukhokhela abasebenzi” okushiwo ngasikhathi sinye kusinika isitatimende esisodwa noma zombili njengamanga. Kungenzeka ukuthi asazi ukuthi eyiphi eyiqiniso kodwa siyazi ukuthi ziyaphikisana futhi siziqamba ngaleyo ndlela.
Lapho ubuzisisa othile, leli phuzu libaluleke kakhulu kangangokuba noma ngubani onikeza amaqiniso amabili aphikisanayo uba umsolwa ophambili okukholelwa ukuthi nguyena onephutha futhi kudingekile ukuba abuzwe eminye imibuzo. Isibonelo, umuntu othi “Ngiyisakhamuzi sase-Switzerland” kodwa une-passport yaseJalimane etholakele empahleni zakhe kuzosolwa ukuthi uqamba amanga.
Lapho amaqiniso “amabili” ephikisana (ephikisana nomunye), singase singazi ukuthi yiliphi eliyiqiniso kodwa siyazi ukuthi womabili angeke abe yiqiniso.
Lapho into ethile ikhishwa yinhlangano eyodwa, ngisho kusuka kubantu ababili abehlukene kuleyo nhlangano, “amaqiniso” amabili aphikisanayo ayi-outpoint.
Le-outpoint iphikisana nesikhathi esilahliwe. Kwi-outpoint yesikhathi esengeziwe sinakho, njengesibonelo esivame kakhulu, okuthile okuthatha isikhathi eside kunokufanele. Lokhu futhi kuyinguqulo yedatha ephikisanayo. Ukwenza isibonelo, ake sithi kukhona okufanele kuthathe amasonto amathathu ukukwenza kepha kubikwa njengokuthatha izinyanga eziyisithupha. Kepha isikhathi esengeziwe kufanele sibonwe njengokubuka kwaso ngoba abantu bavame ukuba “nengqondo,” okusho ukuthi bacabanga izaba zokuthola ukuqonda okuthile futhi bengaboni kuyiyona i-outpoint uqobo.
Esimeni esibi kakhulu, isikhathi esingeziwe siba yi-outpoint ebucayi kakhulu.
Isibonelo, umuntu uthi kwenzeka izinto ezimbili noma ngaphezulu ngasikhathi sinye esasihilela umuntu ofanayo, owayengeke abe nesipiliyoni zazo zombili lezi zigameko. Kulokhu ke isikhathi bekufanele sengezwe endaweni yonke ebonakalayo ukwenza imininingwane ibeyiqiniso. Umuntu usho ukuthi, “Ngaya e-Saigon phakathi kwamabili ngoMbasa 21, 2017, ngomkhumbi ovela e-San Francisco.” Bese kuthiwe “Ngathatha izintambo zomsebenzi wami e-Saigon ngo-Ephreli 30, 2017.” Lapha kufanele sengeze isikhathi endaweni yonke ebonakalayo ukuze zombili izehlakalo zenzeke ngoba umkhumbi ungathatha amasonto amabili noma amathathu ukusuka e-San Francisco uye e-Saigon.
Kuyengezwe Idatha Engasebenziseki
Ngenxa yokuthi kunedatha eyengeziwe (imininingwane) ebikwe ngumuntu othile lokho akusho ukuthi yi-outpoint. Kungaba nje umuntu ozama ukuthi acacelwe. Kepha uma idatha ingadingeki endaweni yamanje noma esimweni futhi yengezwa, kuyinkomba ayi-outpoint.
Ezikhathini eziningi imininingwane engeziwe ihlinzekwa ngumuntu ukumboza ukunganaki kwabo komsebenzi wabo noma ukumboza isimo sangempela. Ngempela kusho ukuthi umuntu uzama ukufihla okuthile.
Ngokuvamile idatha engeziwe nayo inezinye izinkomba njenge-target engalungile noma isikhathi esengeziwe.
Lapho usebenzisa le-outpoint qiniseka kakhulu ukuthi uyaliqonda futhi igama elithi ayinakwenzeka, okusho okuthile okungeke kukwazi ukusetshenziswa noma esimweni esisebenzayo. Futhi bheka ukuthi kuyi-outpoint kuphela uma idatha uqobo lingasebenzi endabeni obhekene nayo.
Kufakwe Ngokungafanele i-Datum
Kunesinye isibonakaliso esibizwa ngokuthi kufakwe ngokungafanele i-datum, okuyikuqhathanisa (okuthile okunobukhona ndawonye nokuthile nokunye) kwi-datum eshiywe njenge-outpoint.
Imvamisa, lokhu kwenzeka lapho umuntu engasiqondi isigameko uqobo, ngoba akanawo umbono waso engqondweni yakhe futhi into yokuqala ayidingayo ukuhlukanisa idatha ayikho.
Isibonelo, thatha umuntu ophethe indawo yokugcina ikhamera ongazi lutho ngezinhlobo zamakhamera. Esikhundleni sokufaka zonke izingxenye ezidingekayo zekhamera ethile ebhokisini elilodwa, uthola ama-lens hoods (isinamathiseli esifanelana nelensi yekhamera ukukhipha ukukhanya kwelanga) wawo wonke amakhamera ahlanganiswe ebhokisini elilodwa elinezimpawu ezingama-lens. Lapho omunye umuntu edinga ukuhlanganisa noma ukusebenzisa ikhamera usebenzisa amahora amaningi ukuthola izitho zawo emabhokisini abhalwe kahle ukuthi “ingemuva lekhamera,” “ama-lens,” “ama-tripods” (imodi yokuxhasa ikhamera enemilenze emithathu), njll.
Kulokhu, lapho umuntu ephuthelwa yindawo yokuthi kunekhamera ebukeka kanjani noma ukuthi isebenza kanjani lapho isethwa, yena ucabanga ukuthi izinto ziyefana lapho zingefani. Ama-lens hoods angama-lens hoods. Ama-tripods angama-tripods. Futhi ke uhlelo olungalungile lwenziwa ukuhlukanisa izingxenye ngoba akazi ukuthi indawo kufanele ibe yini.
Esinye isibonelo ngumhambi ongakwazi ukusho umfaniswano ogqokwa ngumuntu komunye, ngakho ke “uyayixazulula” ngokubeka yonke imifaniswano ngokuthi “abathuthi” (indoda enomsebenzi wayo ukuthwala imithwalo yabahambi ehhotela). Futhi ke unike isikhwama sakhe ukaputeni wamaphoyisa yingakho echithe iholide lakhe ejele.
Lapho uhluleka ukuqonda lesi sigameko, kuzoletha isimo lapho uzocabanga ukuthi into ifana nokunye.
Isibonelo, umphathi wamasosha omusha udlula khona lapho inhloli yesitha igqoke njengomunye wamasosha. Kodwa ke, isikhulu esinolwazi esimi ngemuva kwesikhulu sombuso sibona i-outpoint futhi sibambe ngokushesha inhloli, ngoba inhloli yayingagqokanga umfaniswano wayo ngendlela efanayo namanye amasosha.
Izikhathi zizoshintsha ukuhlukaniswa kwedatha.
Isibonelo, ngo-1920 noma ubani owayephethe ikhamera eduze kwetheku lasolwandle kwakucatshangwa ukuthi uyinhloli. Ngo-1960 noma ngubani owayengaphethe ikhamera wayengeke abe isivakashi, ngakho-ke waye qaphelwa!
Ngakho ke isigameko sesikhathi esisodwa emphakathini akusona isigameko sesinye isikhathi.
Kukhona ezinye izinhlobo ezintathu zombono ovumayo okufanele zaziwe ekusetshenzisweni uphenyo. Lezi zimi kanje:
Okucatshangelwe Ukuthi “Ubunikazi” Akufani
“Ukufana” Okucatshangiwe Akufani noma Akukona Isigaba Sento
“Umehluko” Ocatshangiwe Awuhlukile
Kunezindlela eziningi zamaphutha okusingatha idatha angakunika isithombe esingamanga ngokuphelele.
Lapho usekela izenzo zakho noma ama-oda kwidatha equkethe okukodwa kokucacile okungenhla, uzokwenza iphutha.
ISIZATHU SINCIKE KWIDATHA.
LAPHO IDATHA INEPHUTHA (njengoba ngenhla) IMPENDULO IZOBE INGALUNGILE FUTHI IZOBHEKWA NJENGENGENANGQONDO.
Kunezinombolo ezinkulu zokuhlanganiswa kwale datha. Kungaba ngaphezu kweyodwa noma konke okuvezwayo kungahle kube kumibiko efanayo oyitholayo.
Ukubonwa komuntu nokuxhumana kwakhe ngalokho akubonile nakho kungaqukatha enye yalawa ma-illogics.
Uma kunjalo, khona ke noma yimuphi umzamo owenzayo ukubhekana nalesi simo ngeke uphumelele ukusilungisa noma ukusisingatha.
Uma kukhona noma iyiphi idatha enikezwa lezi zivivinyo ezingenhla, ikwenza wazi ukuthi kungenzeka ukuthi ungenzi ngokunembile.
Ukuthola impendulo enengqondo umuntu kufanele abe nedatha enengqondo.
Ngamanye amagama, noma imuphi umzimba wedatha oqukethe iphutha elilodwa noma amaningi angenhla ungaholela umuntu eziphethweni ezingenangqondo.
Isizathu sokuthi unganikeza noma uthole i-oda elingaqondakali noma elingasebenziwe yingoba umbiko uqukethe iphutha elilodwa noma amaningi alamaphutha angaphezulu ngalesosizathu futhi kwafinyelelwa esiphethweni esingalungile, manje esesetshenziswa kukho.
Kune-condition eyodwa noma amaningi abakhona lapho i-situation noma i-circumstance inengqondo. Lokhu kubizwa ngokuthi ama-pluspoints. I-pluspoint yi-datum yeqiniso etholakala iqinisile uma uyiqhathanisa nohlu olulandelayo lwezimo ezinengqondo.
Ama-pluspoints akhombisa ukuthi i-logic ikhona kuphi nokuthi izinto zihamba kuphi kahle noma lapho zingahamba khona kahle.
Lapho izinto ziba ngcono noma kukhona ukuthuthuka okungazelelwe endaweni noma enhlanganweni, imbangela yalokhu kufanele itholakale ukuqinisa lokho okwakuphumelele. Ukwenza lolu hlobo lokuphenya, usebenzisa ama-plus points.
Lezi zingama pluspoints:
AMAQINISO AHLOBENE AZIWAYO.
(Wonke amaqiniso afanelekile aziwayo.)
IZEHLAKALO NGOKULANDELANA OKULUNGILE.
(Izehlakalo ngokulandelana kwangempela.)
(Isikhathi siphawulwe ngokufanele.)
IDATHA EFAKAZELWE EYIQINISO.
(Idatha kumele ibe ngeyiqiniso, okusho ukuthi kumele kube iqiniso futhi kuvumelekile.)
UKULUNGISA UKUBALULEKA OKUHAMBISANAYO.
(Okubalulekile nokungabalulekile kuhlelwe kahle.)
(Imicimbi eyenzekayo noma eyenziwe ngesikhathi umuntu angalindela ukuba ibe njalo.)
(Azikho izingxenye zedatha ezishiyiwe ezingathonya lesi simo.)
(Idatha efakiwe noma etholakalayo isebenza odabeni lwamanje hhayi okunye.)
(Akuwona umthombo ongalungile.)
(Ukungayi kwesinye isiqondiso esingaba esingalungile kulesi simo.)
IDATHA NGEZIGABA EZIFANAYO.
(Idatha evela ezigabeni ezimbili noma ezingaphezulu zezinto ezibonakalayo ayethulwanga njengesigaba esifanayo.)
(Akufani noma kuhlukile.)
(Ayenziwe ukuthi ifane noma ifanisise.)
Lapho uthola ukuthi kungani izinto zaba ngcono ukuze uqiniseke ukuthi izinto ezifanayo ziyenziwa futhi, kubaluleke kakhulu ukuthi usebenzise ama-pluspoints ngamagama njengenhla.
Ngemuva kwakho konke, ama-pluspoints yiwo enza izinto zihambe kahle.
Ungahlala wazi okuthile nganoma yini.
Yindoda ehlakaniphile, lapho ibhekene nedatha ephikisanayo, ibona ukuthi iyazi okungenani into eyodwa—engayazi.
Ekuqondeni lokho, angabe esethatha isenzo sokuthola lokho.
Uma ehlola idatha ayitholayo ephikisana nezinto ezingenhla, angasicacisa isimo. Ngemuva kwalokho angafinyelela kwisiphetho esinengqondo.
Okufanayo kuyasebenza nakuwe. Ngokusebenzisa lolu lwazi, ungenza izinto zihambe kahle.
Kuyadingeka ukuthola izibonelo zakho zokwephulwa kwe-logic echazwe kulesi sifundo.
Ngokwenza kanjalo, uzobe uthole ikhono lokuhlunga idatha yesimo.
Lapho ukwazi ukuhlunga idatha futhi ube nekhono kuyo, uzoba nzima kakhulu ukukhohliseka futhi uzobe usuthathe isinyathelo sokuqala sokubamba ukulinganisa okuyikho kwanoma yisiphi isimo.